The Ab Presents Nepal » किशोर र पूर्वपत्नी ईशालाई एकै साथ रविले दिए जवाफ !
किशोर र पूर्वपत्नी ईशालाई एकै साथ रविले दिए जवाफ !
एक जरुरी टि.प्प.णी :अन्लाईन खबर डट कम बारम्बार मेरो बितेको कुरा को.ट्याउछ । कहिले ४ वटा बिहे भन्छ, कहिले अमेरिकाको घरको पैसा दिएन भनेर लेख्छ, कहिले छोरिहरुलाई हेरेन भन्छ । न म सङ वास्तविकता सोध्छ । एकोहोरो आ-रो-प छाप्छ । बितिसकेको जीवन बारे मैले आजिवन जवाफ दिएर बस्नेरु सम्पादक अरुण बराल जी, मलाई थाहा छ, तपाईं जनाआस्था बाट पत्रकारिता गर्न शुरु गर्नु भएको ब्यक्ती हो । तपाइँको आदर्श जनआस्था होला र जनआस्थाका सम्पादक तपाइँका गुरु होलान् ।के तपाईंले मेरो करियर आफ्ना गुरुलाई गुरु दक्षिणा दिने बाचा नै गर्नु भएको हो ररुमैले ईशाजीलाई कति पैसा कसरी उपलब्ध गराए, मैले दिएको पैसा घरको किस्ता तिर्न प्रयोग भयो कि अन्यत्र प्रयोग भयो भन्ने कुरा मलाई सोध्नुस न। हिजो राती सम्मपनि म मेरि छोरी सङ कुरा गरि रहेको छु। ईशाका दाइसङ २ हप्ता अघि भेटेकै छु। मेरो जिम्मेवारी मलाई थाहा छ, बहुत राम्ररी।
अनि यति भनेकोमा मैले कुन आपत बेहोर्नु पर्ने हो, त्यो थाहा छैन।अर्को कुरा,भावनात्मक नाता नमरेको भए आफ्ना सन्तानका बाबू हिरासत बाट छुट्ना साथ केहीले उचाल्दैमा बदनाम गराउनु पर्ने के हतारो आइलाग्यो ईशाजी लाई ? के यी सब कुराका लागि उपयुक्त मौका यहि थियो ? मैले गलत गरे कानुन छैन ? छोरीहरुको अधिकार समेत उहाँ आफैले लिन खोज्नु भएकोले सो अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी बाटोको खोजी भैरहेको मात्र हो जुन कुरा उहाँलाई, उहाँका दाईलाई र मेरा छोरिहरुलाई थाहा छ।कानुनी रुपम टुङ्गो लागेको सम्बन्धलाई पटक पटक उचालेर आफ्ना गुरु खुशी पार्ने काम बन्द गर्नुस अरुण बराल जी।कार्यक्रम निर्माणमा गल्ती भए,क.न्टे.न्टमा कुरा गरौ। पारपाचुके भैसकेकी महिलालाई उचाल्न बन्द गरौ र महिलाले पनि मिडिया बाजी बन्द गरौ। वास्तविकता त्यो होइन जुन भनियो र लेखियो । हैरान गर्नेपनि सिमा हुन्छ ।
अमेरिकाबाट पूर्वपति रवि लामिछानेका नाममा : ईशा लामिछाने हुन त मैले यो विषयमा केही बोल्नु उचित नहोला भन्ने सोचेकी थिएँ । तर, पछिल्ला केही दिनमा मेरो एउटा स्टाटसलाई आधार बनाएर अड्कलकै आधारमा समाचारहरु आइरहेको देखेपछि आफ्नो धारणा स्प.ष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकी छु । रवि लामिछाने मैले २५ वर्ष सहयात्रा गरेका श्रीमान मात्र होइन, मेरा दुई छोरीका बाबु पनि हुन् । हाम्रो डिभोर्सपछि दुई छोरीहरुको एक्लो अभिभावकत्व मेरो काँधमा आएको छ ।डिभोर्सपछि हाम्रो बाटो अलग-अलग भयो । उनले नेपालमा नयाँ संसार बसाले । म अमेरिकामा छोरीहरुको सहारामा र उनीहरुलाई सहारा दिएर बाँचिरहेकी छु ।
रवि लामिछाने र इशा लामिछाने कागजीरुपमा सम्वन्ध अ.न्त्य भए पनि भावनात्मक सम्वन्ध न.ष्ट हुन समय लाग्दोरहेछ । सायद मैले आफ्नो मनबाट उनलाई पूर्णरुपमा निकाल्न सकेकी थिइनँ । त्यसैले उनलाई यो विपत्ति आइलाग्दा म बेचैन बनेँ ।तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि उत्तिकै संवेदनशील थियो । अर्को पाटोमा मजस्तै एक स्त्रीको सिउँदो पुछिएको थियो । र, उनका श्रीमानले मर्नेबेलामा रुँदै-रुँदै आफूलाई आ-त्म-ह-त्या गर्न विवश तुल्याएको भनेर रविको नाम लिइरहेका थिए । भिडियो हेरेपछि म निकै सोचमा परेँ ।
रवि हिरासतबाट निस्के पनि दो.ष.मु.क्त भएका छैनन् । म चाहन्छु- अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयलाई किनारा लगा ओस् र वास्तविक तथ्यलाई बाहिर ल्याओस् के धेरै मानिसहरुका लागि भगवान बनेको रविबाट कसैलाई आ-त्म-ह-त्यासम्म धकेल्ने दानवीय कर्म भयो होला रु मैले अझै प.त्याउन सकेको छैन ।यस घटनामा प्रहरीले अ.नु.सन्धान गरिरहेको हुनाले अन्तिम निचोड निकाल्ने उसैको जिम्मेवारी हो । एउटा भिडियोलाई मात्रै आधार मानेर पक्कै पनि प्रहरीले र अदा.लतले निर्णय लिँदैन होला । भिडियोमा दिइएको वयान कति स.त्य हो भनेर पत्ता लगाउने अन्य प्रमाणहरु जुटाइएलान् । र, अ.न्त्य.मा स.त्यता बाहिर आउला ।
म त यति मात्रै कामना गर्छु कि भिडियोमा बोलिएको कुरा सत्य सावित नहोस र रवि नि.र्दो.ष प्रमाणित होउन् ।तर, मेरो कामनाले भन्दा पनि रविलाई उनकै कर्मले जोगाउने हो । यदि गलत काम गरेका छैनन् भने नखाएको विष पक्कै न.ला.ग्ला । यदि शालिकरामले लगाएको आरोप स.त्य ठहरियो भने रविका हजारौं प्रशंसकजस्तै म पनि निराश हुनेछु ।
तर, उनीमाथि उनकै पूर्वसहकर्मीले पैसा खाएको आ.रो.प लगाइरहँदा त्यसले मलाई अ.चम्म बनाएको छ । रविबाट यस्तो काम भयो होला भन्ने विश्वास लाग्दैन । एउटा श्रीमतीका रुपमा मलाई रविलाई दिएका चोटहरु अ.संख्य होलान् । त्यो सम्झनेबेला अहिले होइन ।रवि हि.रा.स.तबाट नि.स्के पनि दो.ष.मुक्त भएका छैनन् । म चाहन्छु- अ.दालतले चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयलाई किनारा लगाओस् र वास्तविक तथ्यलाई बाहिर ल्याओस् । शालिकरामकी पत्नी सम्झनाले न्या.य पाउन् । यदि नि.र्दो.ष भए रविले पनि न्याय पाउन् ।